Jananinepal.comगर्मीको समयमा यौन चाहना किन धेरै? - Jananinepal.com
गर्मीको समयमा यौन चाहना किन धेरै?
आजकल यौन सम्बन्ध आवश्यकता र प्रयोगका कुराहरु विश्वमा सामान्य भैसकेको छ । समाज सँकुचित किन नहोस हाम्रो देशमा पनि यौनका कुराहरू धेरै खुलेर गर्न थालिएको पनि छ । यो सबै समयको अवश्यकताले नै भएको देखिन्छ ।
विश्वमा बढेको प्रविधिको प्रयोग र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन यसका कारक तत्व हुन् ।
आधुनिक समाजमा कार्य व्यस्तता भनौँ वा अन्य समस्याका कारण अधिक विवाहित महिला हुन् वा पुरुष आफ्नो जीवनसाथीसँग सन्तुष्ट भएको देखिँदैन । त्यसैकारण उनीहरु अर्कै अस्थाइ पार्टनरको खोजिमा भौंतारिन्छन् । यस्ता साधनहरूको प्रयोग बजारमा थामिनसक्नु बन्दै गएको छ ।
एक अध्ययनले गर्मीमा महिलाहरु यस खालको सम्बन्धमा बढी आउने देखाएको छ । गर्मी महिनामा धेरै महिलाहरुले पतिलाई धोका दिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । गर्मीमा बढेको तापले शरीरमा यौन चाहना बढाउने र त्यसैको पुर्तालमा महिलाहरू विकल्पमा जाने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
द हेल्‍थ साइट अनलाइनमा प्रकाशित सर्भेका अनुसार यूरोपमा विवाहित महिला गर्मीको मौसममा बढी सेक्सको बारेमा सोच्ने वा यस्तो सम्बन्ध बनाउन लालायित हुन्छन् ।
विवाहोत्तर सम्बन्धबारे शोध गरिरहने एक्ट्रामेरिटल डेटिङ वेबसाइट ग्लीडनले गरेको सर्वेक्षणमा फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड, स्पेन, बेल्जियमर इटलीका ७१ प्रतिशत विवाहित महिला गर्मीमा बढी सेक्स गर्छन् ।
अझै रमाइलो र अच्चम्म के छ भने महिला गर्मीमा स्वच्छन्द र एडभन्चर सेक्स गर्न बढी मन पराउँछन् । त्यसको लागि पति भन्दा अरु नै पुरुष महिलालाई बढि मनपर्ने शोधको निष्कर्ष छ ।
सर्वेक्षणका क्रममा ७६ प्रतिशत महिलाले गर्मीमा बढी सेक्सको चाहाना हुने र त्यसका लागि परपुरुष उपयुक्त छनौटमा पर्ने बताएका थिए । त्यसै गरी ७१ प्रतिशतले गर्मी मौषममा बढी सेक्स गर्ने गरेको बताए ।
सहभागी ७४ प्रतिशत महिलाले गर्मीमा उनीहरुलाई सेक्सका प्रयोगहरु गर्न मन लाग्ने र पर पुरुषहरुसँग सम्बन्ध बनाउन मन लाग्ने गरेको बताएका थिए । ७० प्रतिशत महिलाले त गर्मीमा पुरुषलाई यौनिकरुपमा आकर्षित गर्ने कला विकाश गर्न मन लाग्ने बताएका थिए ।
यो सर्वेक्षण फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड, स्पेन, बेल्जियम र इटलीका ३००० महिलामा यसै महिनाको शुरुमा गरिएको थियो ।
हुन त गर्मी र सेक्समै अध्ययन गर्ने विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले गर्मी भएको बेला सकेसम्म र मिलेसम्म स्वीमिङ्ग पुलमा सेक्स गर्नु उपयुक्त हुनेपनि बताएका छन् । स्वीमिङ्ग पुलमा सेक्स गर्न महिलालाई अत्याधिक मन पर्ने अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
त्यसैगरी गर्मीमा सेक्सको समयमा आईसको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । आईसको प्रयोग गरेर सेक्स गर्दा पूर्ण आनन्द लिन सकिने उसको निष्कर्श छ । आईसको टुक्रालाई सेक्सको समयमा संवेदनशिल अंगमा दल्ने । अनुहार तथा ओठमा राख्ने गर्नाले पनि सेक्समा गर्मीले पार्ने असरलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने उसको निष्कर्श छ ।
गर्मी समयमा सेक्स गर्दा ओच्छ्यान र विस्तारामा भन्दा वाहिर वा बेडको तल खाली ठाउँमा सेक्स गर्दा गर्मीले पार्ने प्रभावमा कमी आउने हुनाले गर्मीमा ओच्छ्यान तातेर सेक्समा पूर्ण आनन्द लिन सकिँदैन भन्ने अनुसन्धानकर्ताको ठहर छ । खाली ठाउँमा पातलो चिसो कपडा वा खाली भुईँमा सेक्स गर्नाले छुट्टै आनन्द आउँछ । त्यसैगरी कोही दम्पति डाइनिङ टेवल वा टेवलको चिसोमा सेक्स गर्न रमाउने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
यस्तै बाथरुमको शावरमा नुहाउँदै सेक्स गर्नाले पनि गर्मीको अनुभव कम हुने बताइएको छ । पानीको फोहोरासँगै सेक्स गर्नुले छुट्टै आनन्द आउँछ भने गर्मीको समस्या पनि हुँदैन । सेक्सको समयमा चिसो पेय पदार्थ खाने, गर्मी गर्ने चिजविजहरु नखाने, एसी रफ्यानको प्रयोग गर्ने गरेमा गर्मीमा पनि सेक्सले दिने आनन्द उत्तिनै हुने र गर्मीको बेला कपडा पुरै खोलेर सेक्स गर्दा पुरूष तथा महिला दुबैमा चरम आनन्द आउने एजेन्सीले बताएको छ ।